Imvelo yase-Afrika -
Abantu abangenanembeza womlando ngabantu abazibhubhisayo, abantu abathambekele ekulahlekelweni yinyama. Kungokubonga okwedlule, umlando, isiko lwayo ... Funda kabanzi
Lapho singaqondi ukuthi imithetho yemvelo isebenza kanjani, futhi ngeke sikwazi ukuhambisana nayo nokuphila kahle. Phambilini e-Afrika, okhokho bethu abaNsundu / base-Afrika babenamandla ... Funda kabanzi
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: May 16, 2020 00: 20 Awekho amazwana
"Impikiswano ivulekile! Lokhu yilokhu amaJuda asho ngokucacile eBhayibhelini (ngokukaJohane 8: 33): "Ukuthi abakaze babe yizigqila zamuntu": NgokukaJohane 8: 22, "AmaJuda athi ... Funda kabanzi
Kungani abelungu / abasentshonalanga bantshontsha i-voodoo? IVoodoo, le nkolo yabamnyama / ama-Afrika agxekwa kakhulu futhi abhekwa njengopopayi, ithandwa kakhulu kamuva nje ngabelungu / baseNtshonalanga "Bayantshontsha" ... (VIDEO)
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: May 15, 2020 15: 15 Awekho amazwana
Abelungu / abaseNtshonalanga abekho ekuqaleni kokuntshontshwa kwengcebo yamasiko abamnyama / nabase-Afrika. Njengoba babeka i-Freemasonry, bamatasa ku-approp ... Funda kabanzi